Malunga | MINGXXUAN
Umenzi weminyaka elishumi wemveliso yamaphepha
Umzi mveliso weenyawo ezingama-215,000 Abasebenzi abangama-150 abanezakhono | Iimveliso eziPhezulu
Ukubonelela Uluhlu lweMveliso ebanzi kunye neNdawo elula
I-Hangzhou Mingxuan Sanitary Products Co Ltd enobuchule ekuvelisweni kwePhepha leNapkins, iBathis Tissue, iPhepha iTowel, iTissue yobuso kunye neewipers nangaphezulu kangangeminyaka eli-10.
Indawo yephepha le-MX eFuang Hangzhou idolophu yaseZhejiang, kunye nokufikelela okulula kwezothutho. Amachweba akufuphi yi-Ningbo
& I-Shanghai, kunye neeyure ezi-3 ukuya eShanghai ngemoto.
I-215,000 ft2 Ifektri enamagcisa ayi-150+
Iphepha le-MX ligubungela indawo engaphezulu kwe-215,000 yeenyawo zeekwere kwaye ngokuqinileyo kusebenza kwindawo eyi-130.000 yeenyawo zeekwere zokuqinisekisa umgangatho kunye nokugcinwa. Sinoochwephesha abangama-200 abaqeqeshekileyo. Ndikudidi lokuqala R
& Umthamo we-D, izixhobo zodidi lokuqala kunye nemveliso egqibeleleyo kunye nenkqubo yolawulo, siyathenjwa ngabathengi abaninzi abaziwayo eYurophu, eMelika, eMzantsi-mpuma Asia njalo njalo. Umgaqo ongaguqukiyo wokuba "unyanisekile, ugqibelele kwaye usebenze ngokufanelekileyo" usikhokelela kwindlela engaphezulu.
I-OEM kunye noVavanyo lweSampula zamkelwe
Sineqela labathengisi abaziingcali abanokubonelela ngamaxabiso okhuphiswano kwiiyure ezingama-24 emva kokufumana izicelo. Siyayixhasa ne-OEM kunye neenkonzo zoVavanyo lweSampula.
Fumana impendulo kwiiyure ezingama-24
Ukuba ufuna iisampulu ezininzi okanye imifanekiso, qhagamshelana nathi ngoku.